butterfly Staxx ingenye engcono Slots mobile inthanethi umdlalo okusekelwe isihloko nature enhle nokudaliweyo kuwo. Kulo mdlalo, ke imayelana ezimibalabala izimbali ezinhle nezintaba izimvemvane. Umdlalo is powered by itolitji emihlanu futhi betways amane ukukusiza ukwenza uphawu win combos. I itolitji asethwe ngokumelene okwenza umfula obuyimfihlo ozungezwe izintaba, utshani nemithi. Umuthi nge cute purple flower efihlekile yinhle kakhulu ngaphandle ebusuku nge izinkanyezi bright. A mesmerizing ukuzindla umculo njalo zidlalwe ngemuva ukuthi umsindo nje umlingo. I ukubheja kule game iqala at £ 0.20 futhi esiphezulu isethwe ongu- £ 400 spin
Mayelana unjiniyela Butterfly Staxx
Lokhu ngokumangalisayo evumelanisiwe engcono Slots mobile inthanethi game yasungulwa uqobo NetEnt. Igama ethandwa ukuzijabulisa online ngokusebenzisa semidlalo yasekhasino ukuthi kubuye kusize abadlali win izimali. Eza nakho ocebile ecela emashumini amabili kule mboni ukuthi wazenza master ubuciko slot amageyimu.
Kukhona izimpawu ezimibalabala kuleli engcono Slots mobile inthanethi umdlalo ezenza itolitji bheka umxhwele. Kukhona obomvu, pink mpungana izimbali kanye elikhazimulayo butterfly elikhanyayo okhokhela umvuzo eliphezulu kakhulu 60x ku ukubheja yakho. Amatshwayo imbali akhokhe 40x ngamunye lapho ezinhlanu izimpawu zabo ivele payline. Ungase futhi ukuqaphela izimpawu ukudlala amakhadi kusuka uJack ukuba Ace. Kunezinhlobo ezingaphezu imbali izimpawu ezimbili ukukusiza uwine kusuka ibhonasi izici. Bayisibonelo lavender imbali anemibala nomunye ngemibala amaningi amacembe.
Wild Symbol: Le mbali nge amacembe emibalabala iyona zasendle futhi ihlanganisa zonke izimpawu base zingangeni chitha. Kubonakala kuwo wonke itolitji futhi kukusiza enze inhlanganisela ethuthukisiwe.
Chitha Symbol: Uphawu lavender imbali iyona chitha isici sale engcono Slots mobile inthanethi umdlalo. Nge ezintathu noma ngaphezulu ukubukeka lolu phawu, ungakwazi ukunqoba eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa spin khulula. Kulezi osebenzisa, ungakwazi kuphela alindele umfece izimpawu ukuvela. Yini okudingeka funa yibo akhazimula ukuthi ujike zibe izimvemvane futhi fly ngakwesobunxele iningi itolitji. Bazigcina okunamathelayo yabo kuze kube sekupheleni konke osebenzisa, akunika ngokuwina inhlanganisela izinkokhelo endleleni yabo.
Nge ingqikithi umlingo ihluzo agqamile, lokhu engcono Slots mobile inthanethi Umdlalo inikeza amathuba ahlukahlukene ungakwazi ukunqoba kusukela.
Jackpot Total £188273.69
Jackpot Total £87989.59
Jackpot Total £40319.43
Jackpot Total £26994.58
Jackpot Total £15787.42
Jackpot Total £10160.54
Jackpot Total £8921.81